Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → mars → 14 → Andrianarivo : Ramatoabe nafatotra teo amina Poteau dia novonoina fa hoe mpamosavy
Efa misy olona roa amin’izao atao fanadihadiana mikasika ity fahafatesana ity
Ny alin’ny roambinifolo martsa teo no naboridana sy nampijaliana ary novonoina ity ramatoa iray any ho any amin’ny 70 taona mahery any. Marihina fa tsy dia salama saina loatra ity farany ary efa betsaka ny olona eo amin’ny manodidina no mahafantatra azy, satria mipetraka eo Ambohitrakely eo avokoa ireo taranany.
Tsy hay marina moa ny zava-niseho raha nidina teny an-toerana izahay ka nanontany ny Sefo fokontany, fa araka ny fitantarany dia efa naratra mafy sy tsy nahatsiaro tena ilay ramatoa no nisy niantso tany an-tranony izy. Teo vao samy nihazakazaka nijery izy, ary efa tomefy olona moa nitangorona nanodidina ny razana. Raha ny fahitana ny razana moa dia toa olona nofatorana tongotra aman-tanana dia notaritina tamin’ny tany, ary avy eo vao nofatorana tamin’ny tongotra takela-by, ary teo no nanaovana ny herisetra tamin’ny alalan’ny daroka sy ny vely kibay. Nivonto be moa no lohan’ilay ramatoa ary nivoaka rà ny sofiny. Niboridana tanteraka ny razana tamin’ ny nahitana azy. Mpikarakara fako teo akaikin’ny toerana nahitana ny razana no nataon’ny polisy misahana ny heloka be vava fanadiahadiana, marihina fa mivady ireo olona ireo ary mpifindra monina avy any Antsirabre any, ka sady mbola tsy manana fifindra-monina no tsy manana ny taratasy mikasika azy ireo amin’ny fokontany ipetrahany. Nahavita trano kely hazo eo akaikin’ny fanariana fako moa izy ireo ka izay no nangalana am-bavany azy amn’izay zavatra mety ho niseho sy nitranga ny alin’ny famonoana ilay ramatoa.
Voalazan’ ny Sefo fokontany taminay moa fa mangina dia mangina tokoa iny faritra iny sady maizina rehefa amin’ny alina ka manararaotra tokoa ireo olon-dratsy amin’ny fanendahana sy ny herisetra. Efa eo am-panaovana ny famotorana ny polisy ka tsy ho ela dia ho fantatra ny tena marina mikasika ity vonoan’olona ity.